AKHRISO Hadalkii Ugu Horreeyay Ee Uu Thomas Partey Yidhi
Saxeexa cusub ee kooxda Arsenal ee Thomas Partey ayaa markii ugu horreysay hadlay isaga oo ciyaaryahan kooxdaas ah isla markaasna farriin usoo diray jamaahiirta kooxdiisa cusub.
27 sano jirkan ayaa habeenimadii Isniintii lacag 45 Milyan oo Pound ah Arsenal ugaga soo wareegay dhinaca Atletico Madrid iyadoo uu tababare Mikel Arteta kor u qaaday dookhyadiisa khadka dhexe xilli ay kooxdu ugu yaraan afarta sarre u tartami doonto.
Partey ayaa hadda xulkiisa qaranka ee Ghana oo uu kulamo caalami ah u ciyaarayo ku sugan isla markaana mudo sugi doona ilaa inta uu la midoobayo asxaabtiisa cusub, laakiin khadkan dhexe ayaa barta Twitter-ka adeegsaday si uu farriin ugu sii diro taageerayaasha kooxdiisa.
Partey ayaa ugu horreynba jamaahiirta kooxdiisa uga mahad celiyay dareenka farxadeed ee ay kusoo dhaweeyeen isaga oo dareen cajiib ah ku sifeeyay inuu qayb ka noqdo qoyska Gunners.
Thomas ayaa hadalkiisa ku bilaabay “Waan idin salaamay, aad ayaad ugu mahadsan tihiin jacaylka iyo farriinta aan helay, ma sugi karo inaan qayb idinka mid ah noqdo, ma sugi karo inaan kooxda kusoo biiro”
“Waa dareen cajiib ah inaan qayb ka noqdo qoys sidan oo kale ah, qofkasta aad ayuu ugu mahadsan yahay jacaylka, waxaan dareemayaa abaalcelin aad u weyn waxaanan aad ula dhacsanahay inaan qayb idinka noqdo, ma sugi karo inaan idinku soo biiro”
Partey ayaa sanadihii ugu dambeeyay ahaa mid joogto ka ah shaxda tababare Diego Simeone ee Atletico Madrid isaga oo 188 kulan usoo ciyaaray tan iyo sanadkii 2015 markii uu usoo wareegay.
Ugu dambayn, Thomas ayaa kulankiisa ugu horreeya ee Arsenal ku bilaaban doono ciyaarta ay kooxdiisu booqanayso dhigeeda Manchester City.